Ezinye Izithako Ezisebenzayo Abakhiqizi Nabahlinzeki - Imboni Yezithako Ezisebenzayo Yase-China
I-Beta-Nicotinamide mononucleotide (“NMN”, “NAMN”, kanye “ne-β-NMN”) iyinucleotide etholakala ku-ribose ne-nicotinamide. Njenge-nicotinamide riboside, i-NMN iphuma ku-niacin, futhi abantu banama-enzyme angasebenzisa i-NMN ukuze bakhe i-nicotinamide adenine dinucleotide (NADH).
I-1, 3-Dihydroxyacetone eyaziwa nangokuthi i-glycerone, i-carbohydrate elula (i-triose) enefomula C 3H 6O 3. 1, 3-Dihydroxyacetone i-ketose eyenzeka ngokwemvelo ebolayo, edlekayo futhi engenabuthi emzimbeni womuntu kanye nemvelo. . Kuyisithasiselo esisebenza ngezindlela eziningi esingasetshenziswa ezimbonini zezimonyo, ezemithi nezokudla.
I-Zinc Pyrrolidone Carboxylate Zinc PCA (PCA-Zn) iyi-ion ye-zinc lapho i-sodium ion ishintshaniswa khona ukuze kwenziwe isenzo se-bacteriostatic, kuyilapho inikeza isenzo sokuswakama kanye nezakhiwo ezinhle kakhulu ze-bacteriostatic esikhumbeni.
Inani elikhulu locwaningo lwesayensi lubonise ukuthi i-zinc inganciphisa ukugcinwa ngokweqile kwe-sebum ngokuvimbela i-5-a reductase. Ukwengezwa kwe-zinc esikhumbeni kusiza ukugcina umzimba ojwayelekile wesikhumba, ngoba ukuhlanganiswa kwe-DNA, ukuhlukaniswa kwamaseli, ukuhlanganiswa kwamaprotheni kanye nomsebenzi wama-enzyme ahlukahlukene ezicutshini zomuntu azihlukaniseki ku-zinc.
I-Glutathione (GSH), ebizwa nangokuthi i-Reduced Glutathione, i-tripeptide eyakhiwe i-glutamate, i-cysteine, ne-glycine. Ingatholakala cishe kuwo wonke amangqamuzana omzimba womuntu. Kulezi zinsuku, ukukhiqizwa kwezimboni kweGlutathione kutholwa ikakhulukazi ngokuhlangana kwe-enzymatic. Inemisebenzi yebhayoloji efana nokukhipha ubuthi, i-anti-oxidation, i-free radical scavenging, ukwenza mhlophe kwesikhumba kanye nokufiphala kwamabala. Ngakho-ke, isetshenziswa kabanzi ku-cosmetics, imithi, imikhiqizo yokunakekelwa kwezempilo nezinye izimboni.
I-Chlorphenesin ine-spectrum ebanzi kanye nokusebenza okuhle kakhulu kwekhono lokulwa namagciwane, inomphumela omuhle wokuvimbela amagciwane e-Gram-negative kanye namabhaktheriya e-Gram-positive, isetshenziselwa isikhunta esibanzi, ama-antibacterial agents; izimonyo nokunakekela komuntu siqu Kwakhiwe ngesilondolozi esisebenza emhlabeni wonke ukuze kuthuthukiswe ukusebenza kwesistimu yokulwa nokugqwala. Amapharamitha Abalulekile Wezobuchwepheshe: Ukubukeka Amakristalu anombala okhilimu ophaphathekile noma ama-crystalline aggregate. Iphunga kancane phenolic; ukunambitha okubabayo...
I-Octocrylene isikrini selanga se-UVB esinezici ezinamandla ezimelana namanzi kanye nebanga lokumunca elibanzi. Ibonisa ukuqina kwezithombe ezinhle, futhi ihlolwa izinkampani eziningi njengesithuthukisi se-SPF esisebenzayo nesithuthukisi sokuvimbela amanzi. Lesi isithako esibizayo esinezinga lokusetshenziswa elivunyiwe lamaphesenti angu-7 kuya kwangu-10 kokubili e-United States nase-European Union. Nakuba ithola ukuduma phakathi kwabaqulunqi, izindleko zayo nezinga lokusetshenziswa kungakhawulela ukusetshenziswa. Ngaphezu kwalokho, ezinye izifundo zibonisa ukuthi kungase kubangele ukungezwani komzimba esikhumbeni ngomlando we-photoallergy.
I-Allantoin Ikhishwe empandeni yesitshalo se-comfrey, i-Allantoin iyisithako esingacasuli esipholisa futhi sivikele isikhumba. Ngekhono lokusiza ukuphulukisa isikhumba futhi ukhuthaze ukukhula kwezicubu ezintsha, iyi-rounder enhle kakhulu yokugcina isikhumba siphezulu emdlalweni waso. Ithambisa kahle futhi isiza ukuvikela isikhumba, isenze sifanelekele isikhumba esibucayi. I-Allantoin iyisithako esisebenzayo esikhumbeni esine-keratolytic, moisturizing, epholisayo, anti-irritant properties, ikhuthaza ukuguga ...